Akụkọ - Ọ bụ oge ịgagharịgharị Ọrụ Nkwukọrịta nke Nkwakọ ngwaahịa
Oge erugo ilegharị anya ọrụ nkwukọrịta nke nkwakọ ngwaahịa
Ma ọ bụ akụkụ ika ma ọ bụ onye ahịa, ha niile kwenyere n'ahịrịokwu a:isi ọrụ nke nkwakọ ngwaahịa bụ nkwurịta okwu.
Agbanyeghị, ihe ndị otu abụọ a lekwasịrị anya nwere ike ọ gaghị abụ otu: ozi oge niile nke ika na-amanye n'ime akara n'ihi ụkpụrụ iwu nwere ike bụrụ azụmaahịa dị mkpa na mkpebi ịzụrụ ndị ahịa.
Kedu nkọwapụta ndị na-emetụta mkpebi ịzụrụ ndị ahịa?
Efrata na Ihe Nri
"Ọ ga-eleba anya na ndụ ndụ, ihe oriri, tebụl ike."
"Ebe a na-ere ahịa e dere na ngwugwu ahụ dị m irè nke ukwuu, dị ka ịgbakwunye nje bacteria XX, m ga-azụta ya; shuga efu na calorie efu, m ga-azụta ya."
N'ime nyocha ahụ, anyị chọpụtara na ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-eto eto na-azụ ahịa na-enwe nchegbu dị ukwuu banyere ndepụta ihe na ndepụta ike.Ha dị ka ọ na-anụ ọkụ n'obi karịa iji atụnyere ndepụta ngwa nri na akara oriri na-edozi ahụ karịa ịtụnyere mkpado ọnụahịa.
Ọtụtụ mgbe, isi okwu - "zero trans fatty acid", "zero sugar", "calorie efu", "belata nnu" nwere ike ime ka ha wepụta koodu QR ugwo.
Nke ahụ bụ, a ga-etinye "ihe ire ere" dị otú ahụ n'ọnọdụ kachasị mma nke ngwugwu ahụ iji dọta uche na ịkpali ịzụrụ.
"Mmalite dị mkpa, na ikike ịdị arọ kwesịrị ka o doo anya."
"O nwere ike ọ gaghị emetụ m n'obi banyere ebe obibi mbụ, mana m ga-eleba anya na ngwaahịa ndị jụrụ oyi mgbe ọrịa ahụ gasịrị."
"Nchọpụta mmalite dị mkpa ọbụna karị. Ọ kachasị mma ịhụ anụ ụlọ Australia ma ọ bụ anụ ụlọ America na nlele."
Ma ọ na-ebubata ma ọ bụ mpaghara, mkpa nke mmalite na-adabere ma ọ bụ ebe a na-ere ahịa ma ọ bụ na ọ bụghị.Ihe na-adọrọ mmasị karị, ọ nwere ike ịgbanwe n'ihi ịrị elu nke echiche ọhụrụ, ebe mba ụwa na ọbụna mgbanwe na ọnọdụ dị ugbu a.
Maka ozi dị otú ahụ, ụzọ nzikọrịta ozi kwesịkwara ịdị ọhụrụ. Otu na mgbe ị ga-ekwurịta okwu nke ọma dị n'aka ika ahụ.
Ụbọchị mmepụta na ụbọchị njedebe
"Enweghị m mmasị na ụbọchị njedebe na obodo si na-ede obere ihe na nkwakọ ngwaahịa."
"Ọ na-amasị m nkwakọ ngwaahịa ebe ị nwere ike ịhụ ụbọchị njedebe na nlele, ezola ya ma chọta ya."
"Ọ bụrụ na e dere ụfọdụ ozi ngwaahịa na igbe dị n'èzí, mgbe etinyere ya na refrjiraeto, ndụ nchekwa na ozi ndị ọzọ dị mkpa agaghị ahụ anya ruo ogologo oge."
The ika n'akụkụ na-emekarị na-ekpebi ebe abụọ ndị a iberibe ozi ga-"dokwa" dabere na àgwà nke ngwaahịa na nkwakọ mmepụta usoro, na mmepụta arụmọrụ dị ka mkpa.Mana mkpa nke ozi a nwere ike eleda ya anya nke ukwuu.
Nyochaa ụbọchị mmepụta na ụbọchị ngwụcha nke ngwaahịa na-abụkarị nzọụkwụ ikpeazụ maka ndị na-azụ ahịa ịzụta.Ikwe ka ndị na-azụ ahịa rụọ ọrụ nyocha ngwa ngwa nwere ike ịkwado azụmahịa ngwa ngwa.Nke a ezi uche azụmahịa mgbe ego n'anya araparawo na nke a na juncture, na e nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-ahapụ ịzụrụ n'ihi na ozi bụ oke "zochiri" na "adịghị adị", na ọbụna nwere" iwe" kwupụta ika na ngwaahịa.
Ọ bụ oge iji letagharịa ọrụ nkwukọrịta nkenkwakọ ngwaahịa
Mgbe akụkụ ika ahụ na-eji mpempe akwụkwọ dochie ihe nkwakọba plastik, ọ bụ ihe dị mkpa mere na "nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ na-enye aka na nkwurịta okwu".Nkwakọ ngwaahịanwere ike inyere ụdịdị aka site na nhazi nzikọrịta ozi buru ibu yana usoro mbipụta akwụkwọ dị iche iche.Fang ga-ekwurịta okwu nke ọma ma mee ka echiche nke uru pụta ìhè.